ပွဿနာအားလုံးအတှကျ အကောငျးဆုံးအဖွကေိုရှာဖှပေေးနိုငျမယျ့ Six Thinking Hats
Six Thinking Hats ကို ကွားဖူးပါသလား? Six Thinking Hats ဆိုတာ Problem Solving (ပွဿနာဖွရှေငျးခွငျး) အတှကျ သိပျကိုအရေးပါတဲ့ Brainstorming Technique တဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဒီနညျးလမျးက ကြှနျတျောတို့ရဲ့ Critical Thinking (စိတျဖွာတှေးတောခွငျး) ကို အားကောငျးလာစပွေီး ပွဿနာတဈခုကို အဖွရှောတဲ့အခါ မတူညီတဲ့ ရှုထောငျ့ပေါငျးစုံကနေ စနဈတကစြဉျးစားစတေဲ့ နညျးလမျးတဈခုဖွဈတဲ့အတှကျ ဆုံးဖွတျခကျြတှကေိုလညျး မှနျမှနျကနျကနျ မွနျမွနျဆနျဆနျခနြိုငျအောငျ ကူညီပေးမှာဖွဈပါတယျ။
Six Thinking Hats ဆိုတာဘာလဲ?
အမှနျတကယျကတော့ Six Thinking Hats က ၁၉၈၅ ခုနှဈလောကျက ထုတျဝခေဲ့တဲ့ စာအုပျတဈအုပျပါ။ စာရေးဆရာကွီး Edward de Bono ရသေားခဲ့ပွီး သိပျကိုကြျောကွားခဲ့တဲ့စာအုပျတဈအုပျဖွဈပါတယျ။
Six Thinking Hats တှကေဘာတှလေဲ?
Thinking Hats ဆိုတဲ့အတိုငျး တှေးချေါပုံ၊ တှေးချေါနညျးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာပျေါက လူတိုငျးမှာ မတူညီတဲ့ ကိုယျရညျကိုယျသှေးတှရှေိကွပါတယျ။ ဒီ ကိုယျရညျကိုယျသှေးတှအေရပဲ သူတို့ တှေးချေါပုံတှကေ တဈဦးနဲ့တဈဦးမတူညီကွပါဘူး။ မတူညီတဲ့ တှေးချေါနညျးတှကေို လလေ့ာဆနျးစဈလိုကျတဲ့အခါ ဒီ (၆) မြိုးထှကျလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။
အဆိုပါ Six Thinking Hats တှကေတော့
(၁) White Thinking Hat (Facts)
(၂) Yellow Thinking Hat (Positivity )
(၃) Black Thinking Hat (Judgment)
(၄) Red Thinking Hat (Feelings)
(၅) Green Thinking Hat (Creativity)
(၆) Blue Thinking Hat (Analysis) တို့ဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုတှေးချေါပုံမြိုးကို “စုံထောကျဉာဏျ” လို့ ဆိုကွပါတယျ။ သူက ပွဿနာတဈရပျကို တိကရြရောတဲ့ အခကျြအလကျတှစေုပွီး အဖွရှောတဲ့သဘောပေါ့နျော။ သူက တိကတြဲ့အခကျြအလကျတှကေို စုတယျ၊ ဝဖေနျတယျ၊ ခှဲခွားတယျ၊ ပွီးမှ ဘယျအရာကလိုအပျနသေလဲ။ ဘယျလိုဖွရှေငျးရမလဲဆိုတဲ့ အဖွကေို ထုတျပါတယျ။ ဒါက ပွဿနာကို ခဉျြးကပျတဲ့နညျးလမျးတဈခုပါ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့အနနေဲ့တော့ ဘယျလိုအခြိနျ၊ ဘယျလိုပွဿနာမြိုးမှာ အဖွူရောငျဦးထုပျကိုဆောငျးမလဲဆိုတာကိုတော့ ရှေးခယျြတတျဖို့လိုပါတယျ။
(၂) Yellow Thinking Hat (Positivity)
အဝါရောငျအတှေးဦးထုပျကကတြော့ စိတျအားထကျသနျခွငျးနဲ့ အကောငျးမွငျခွငျးကို ကိုယျစားပွုပါတယျ။ နသောပွီးတောကျပတဲ့နရေ့ကျတှမှောတော့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ စှမျးအငျတှနေဲ့ အသဈအသဈသောအတှေးတှကေို ဖမျးဆုပျဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံးဦးထုပျပါ။ အဝါရောငျအတှေးဦးထုပျကို ဆောငျးမယျဆိုရငျ သူက အကြိုးနဲ့တနျဖိုးတှကေိုပဲရှာဖှပေေးမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အထကျကပွောခဲ့သလိုပဲ ဘယျလိုပွဿနာမြိုးကိုဖွရှေငျးတဲ့အခြိနျမှာ အသုံးပွုမလဲ ဆိုတာကိုတော့ သငျကိုယျတိုငျနားလညျဖို့လိုပါတယျ။
Judgment ဆိုတဲ့အတိုငျးပဲ သူကတော့ မကောငျးခွငျး၊ မပွညျ့စုံခွငျးတှကေိုပဲ ဦးတညျတှေးချေါခွငျးဖွဈပါတယျ။ တဈခါတဈရံမှာ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ လိုအပျခကျြတှကေို သခြောရှာဖှနေိုငျဖို့လိုပါတယျ။ ဒီလိုအခြိနျမြိုးမှာဆို Black Hat ကိုရှေးခယျြတာအကောငျးဆုံးပါ။ Black hat က အားနညျးခကျြတှေ၊ ဖွဈလာနိုငျတဲ့ အန်တရာယျတှေ၊ လိုအပျခကျြတှကေို ဖျောထုတျပေးနိုငျတာဖွဈတဲ့အတှကျ အပျေါက Yellow Hat နဲ့ တှဲဖကျဝတျဆငျရငျတော့ လုံးဝပွီးပွညျ့စုံခွငျးပဲပေါ့ခငျဗြာ။
အကယျ၍ ကြှနျတျောတို့ အနီရောငျအတှေးဦးထုပျကို ဝတျဆငျမိကွတဲ့အခါ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အစီအစဉျအားလုံးက အလိုလိုသိခွငျး၊ ခံစားခကျြတှပေျေါမှာပဲ အခွခေံပွီး ဖွဈတညျလာပါတော့တယျ။ ဒီတှေးချေါပုံမြိုးကကတြော့ ပွဿနာကို ရိုးရိုးသားသားခဉျြးကပျပွီး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးအဖွရှောခွငျးမြိုးပါ။ ဆိုလိုတာက ကိုယျ့ Product ကိုအသုံးပွုမယျ့ လူတှရေဲ့ လိုအပျနတေဲ့ ခံစားခကျြကဘာလဲ။ သူတို့ကို နှဈသကျစမေယျ့ ခံစားခကျြမြိုးကို ဘယျလိုပေးစှမျးမလဲ ဆိုတဲ့အခကျြတှပေျေါမူတညျပွီး စဉျးစားအဖွရှောခွငျးမြိုးဖွဈပါတယျ။
အစိမျးရောငျအတှေးဦးထုပျကတော့ ကြှနျတျောတို့ကို ဖွဈနိုငျခတြှေရေဲ့ ပွငျပကို ဆှဲချေါထုတျပွီးအဖွရှောခိုငျးခွငျးပါ။ အစိမျးရောငျဦးထုပျကိုဆောငျးရမယျ့အခြိနျကတော့ ဆနျးပွားတဲ့အတှေးတှကေို ရှာဖှနေိုငျဖို့အတှကျ အားလုံးရဲ့ ပွငျပကို ခဏထှကျလိုကျရခြိနျမှာ ဆောငျးသငျ့တာဖွဈပါတယျ။
(၆) Blue Thinking Hat (Analysis)
အပွာရောငျဦးထုပျကတော့ အခွအေနအေရ လိုအပျတဲ့စီမံခနျ့ခှဲမှုမြိုးတှကေိုရှာဖှတေဲ့အခါမှာ ဆောငျးသငျ့တဲ့ဦးထုပျပါ။ ကြှနျတျောတို့က အပွာရောငျဦးထုပျကို ဆောငျးလိုကျတဲ့အခါ ကြှနျတျောတို့အလုပျက တခွားသောဦးထုပျကိုဆောငျးထားတဲ့သူတှဆေီက ရလာတဲ့ အကွံဉာဏျအားလုံးကို သခြောဆနျးစဈပွီး ပွဿနာဖွရှေငျးတဲ့အခါတကယျအကြိုးသကျရောကျမှုရှိစမေယျ့ အဖွတေဈခုကို ရှာဖှရေမှာပဲဖွဈပါတယျ။
Six Thinking Hats မှာပါဝငျတဲ့ ဦးထုပျတဈခုစီတိုငျးမှာ အားသာခကျြ၊ အားနညျးခကျြကိုယျစီရှိကွပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ ပွဿနာတဈခုကိုရှာဖှတေဲ့အခါမှာ မတူညီတဲ့ရှုထောငျ့ပေါငျးစုံကနပွေီးတော့ အဖွတေဈခုကိုရှာဖှကွေရပါတယျ။ လူတိုငျးမှာတော့ အားသနျရာသနျရာဦးထုပျတှရှေိကွပမေယျ့ တဈခုသတိထားရမှာက ဘယျအခြိနျ၊ဘယျအခွအေနမှော အသုံးပွုသငျ့တယျဆိုတာမြိုးကိုတော့ သိထားဖို့လိုပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ Brainstorming လုပျကွတဲ့အခါ အသငျးအဖှဲ့ထဲက လူတဈယောကျစီကို ဒီလို ရှုထောငျ့တဈခုစီကနေ သုံးသပျအဖွရှောခိုငျးခွငျးက ထိရောကျတဲ့နညျးလမျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ပဲ Six Thinking Hats က အကောငျးဆုံးပွဿနာဖွရှေငျးခွငျးနညျးလမျးတဈခုအဖွဈ အသတျမှတျခံထားရခွငျးဖွဈပါတယျ။
ပြဿနာအားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေကိုရှာဖွေပေးနိုင်မယ့် Six Thinking Hats
Six Thinking Hats ကို ကြားဖူးပါသလား? Six Thinking Hats ဆိုတာ Problem Solving (ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း) အတွက် သိပ်ကိုအရေးပါတဲ့ Brainstorming Technique တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီနည်းလမ်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Critical Thinking (စိတ်ဖြာတွေးတောခြင်း) ကို အားကောင်းလာစေပြီး ပြဿနာတစ်ခုကို အဖြေရှာတဲ့အခါ မတူညီတဲ့ ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေ စနစ်တကျစဉ်းစားစေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်း မှန်မှန်ကန်ကန် မြန်မြန်ဆန်ဆန်ချနိုင်အောင် ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်တကယ်ကတော့ Six Thinking Hats က ၁၉၈၅ ခုနှစ်လောက်က ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ။ စာရေးဆရာကြီး Edward de Bono ရေသားခဲ့ပြီး သိပ်ကိုကျော်ကြားခဲ့တဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Six Thinking Hats တွေကဘာတွေလဲ?
Thinking Hats ဆိုတဲ့အတိုင်း တွေးခေါ်ပုံ၊ တွေးခေါ်နည်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က လူတိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေရှိကြပါတယ်။ ဒီ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေအရပဲ သူတို့ တွေးခေါ်ပုံတွေက တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးမတူညီကြပါဘူး။ မတူညီတဲ့ တွေးခေါ်နည်းတွေကို လေ့လာဆန်းစစ်လိုက်တဲ့အခါ ဒီ (၆) မျိုးထွက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အဆိုပါ Six Thinking Hats တွေကတော့
(၆) Blue Thinking Hat (Analysis) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုတွေးခေါ်ပုံမျိုးကို “စုံထောက်ဉာဏ်” လို့ ဆိုကြပါတယ်။ သူက ပြဿနာတစ်ရပ်ကို တိကျရေရာတဲ့ အချက်အလက်တွေစုပြီး အဖြေရှာတဲ့သဘောပေါ့နော်။ သူက တိကျတဲ့အချက်အလက်တွေကို စုတယ်၊ ဝေဖန်တယ်၊ ခွဲခြားတယ်၊ ပြီးမှ ဘယ်အရာကလိုအပ်နေသလဲ။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ အဖြေကို ထုတ်ပါတယ်။ ဒါက ပြဿနာကို ချဉ်းကပ်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်အနေနဲ့တော့ ဘယ်လိုအချိန်၊ ဘယ်လိုပြဿနာမျိုးမှာ အဖြူရောင်ဦးထုပ်ကိုဆောင်းမလဲဆိုတာကိုတော့ ရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။
အဝါရောင်အတွေးဦးထုပ်ကကျတော့ စိတ်အားထက်သန်ခြင်းနဲ့ အကောင်းမြင်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ နေသာပြီးတောက်ပတဲ့နေ့ရက်တွေမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စွမ်းအင်တွေနဲ့ အသစ်အသစ်သောအတွေးတွေကို ဖမ်းဆုပ်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးဦးထုပ်ပါ။ အဝါရောင်အတွေးဦးထုပ်ကို ဆောင်းမယ်ဆိုရင် သူက အကျိုးနဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပဲရှာဖွေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အထက်ကပြောခဲ့သလိုပဲ ဘယ်လိုပြဿနာမျိုးကိုဖြေရှင်းတဲ့အချိန်မှာ အသုံးပြုမလဲ ဆိုတာကိုတော့ သင်ကိုယ်တိုင်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။
Judgment ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ သူကတော့ မကောင်းခြင်း၊ မပြည့်စုံခြင်းတွေကိုပဲ ဦးတည်တွေးခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို သေချာရှာဖွေနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဆို Black Hat ကိုရွေးချယ်တာအကောင်းဆုံးပါ။ Black hat က အားနည်းချက်တွေ၊ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တွေ၊ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် အပေါ်က Yellow Hat နဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ရင်တော့ လုံးဝပြီးပြည့်စုံခြင်းပဲပေါ့ခင်ဗျာ။
အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့ အနီရောင်အတွေးဦးထုပ်ကို ဝတ်ဆင်မိကြတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အစီအစဉ်အားလုံးက အလိုလိုသိခြင်း၊ ခံစားချက်တွေပေါ်မှာပဲ အခြေခံပြီး ဖြစ်တည်လာပါတော့တယ်။ ဒီတွေးခေါ်ပုံမျိုးကကျတော့ ပြဿနာကို ရိုးရိုးသားသားချဉ်းကပ်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအဖြေရှာခြင်းမျိုးပါ။ ဆိုလိုတာက ကိုယ့် Product ကိုအသုံးပြုမယ့် လူတွေရဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ ခံစားချက်ကဘာလဲ။ သူတို့ကို နှစ်သက်စေမယ့် ခံစားချက်မျိုးကို ဘယ်လိုပေးစွမ်းမလဲ ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး စဉ်းစားအဖြေရှာခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင်အတွေးဦးထုပ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ဖြစ်နိုင်ချေတွေရဲ့ ပြင်ပကို ဆွဲခေါ်ထုတ်ပြီးအဖြေရှာခိုင်းခြင်းပါ။ အစိမ်းရောင်ဦးထုပ်ကိုဆောင်းရမယ့်အချိန်ကတော့ ဆန်းပြားတဲ့အတွေးတွေကို ရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက် အားလုံးရဲ့ ပြင်ပကို ခဏထွက်လိုက်ရချိန်မှာ ဆောင်းသင့်တာဖြစ်ပါတယ်။
အပြာရောင်ဦးထုပ်ကတော့ အခြေအနေအရ လိုအပ်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးတွေကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာ ဆောင်းသင့်တဲ့ဦးထုပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့က အပြာရောင်ဦးထုပ်ကို ဆောင်းလိုက်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့အလုပ်က တခြားသောဦးထုပ်ကိုဆောင်းထားတဲ့သူတွေဆီက ရလာတဲ့ အကြံဉာဏ်အားလုံးကို သေချာဆန်းစစ်ပြီး ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့အခါတကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေမယ့် အဖြေတစ်ခုကို ရှာဖွေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Six Thinking Hats မှာပါဝင်တဲ့ ဦးထုပ်တစ်ခုစီတိုင်းမှာ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာ မတူညီတဲ့ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ အဖြေတစ်ခုကိုရှာဖွေကြရပါတယ်။ လူတိုင်းမှာတော့ အားသန်ရာသန်ရာဦးထုပ်တွေရှိကြပေမယ့် တစ်ခုသတိထားရမှာက ဘယ်အချိန်၊ဘယ်အခြေအနေမှာ အသုံးပြုသင့်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုတော့ သိထားဖို့လိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် Brainstorming လုပ်ကြတဲ့အခါ အသင်းအဖွဲ့ထဲက လူတစ်ယောက်စီကို ဒီလို ရှုထောင့်တစ်ခုစီကနေ သုံးသပ်အဖြေရှာခိုင်းခြင်းက ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ Six Thinking Hats က အကောင်းဆုံးပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် အသတ်မှတ်ခံထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။